स्थापना काम - निर्माण प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण भाग
स्थापना निर्माण मा काम गर्दछ - धातु र ठोस संरचना, पाइपलाइन, मुख्य काम गर्न निर्माण उपकरण को तयारी को सम्मेलन। छोटो मा, स्थापना - यो काम गर्न निर्माण साइट को प्रारम्भिक तयारी छ।
को कार्यान्वयन निर्माण र स्थापना काम सबैभन्दा महंगा र समय-खपत प्रक्रियाहरू को एक बीचमा छ। तिनीहरूले सामाग्री, को काम क्षेत्र र अत्यधिक योग्य स्थापनाकर्ताहरू विशेषज्ञहरु को होसियार तयारी चाहिन्छ।
स्थापना काम को निर्माण मा विशेष महत्व छन् उच्च वृद्धि भवनहरु। यस्तो संरचना को बल ठोस संरचना गुणस्तर र अनुपालन आफ्नो स्थापना प्रविधि मा निर्धारित छ, सबै माथि। ठोस संरचना प्रबलित विशेष उद्यम मा उत्पादन। तिनीहरूले ठोस र reinforcing फलाम संरचना विवरण हो। यो सेवा को जसको अवधि दशकसम्म गणना एक धेरै टिकाउ सामाग्री छ।
स्थापना काम निर्माण को लागि साइट तयार सुरु। यसलाई समावेश: वितरण र निर्माण उपकरण र प्रविधिको विधानसभा। विशेषज्ञहरु माउन्ट क्रेन, खुम्च्याउने र पम्पिंग स्टेशन, अस्थायी प्राविधिक पाइपलाइन, बिजुली कुक प्रशस्त। स्थापना - यो केवल विधानसभा र उपकरण को समायोजन, तर पनि सबै समय मा आफ्नो सेवा, निर्माण अगाडि बढ्न हुनेछ गर्दा हो। निर्माण को भविष्यको लागि पिट digging पछि, बवासीर जग लागि आधार हो र संरचना को स्थिरता निर्धारण गर्ने hammered। थप बिल्डर्स एक भवन र प्रारुप हो जो प्रबलित ठोस संरचना, को स्थापना सुरु तल्ला डेक।
यो पूरा मा काम को प्रकार सुरक्षा नियमहरु को उत्सव ठूलो ध्यान दिन्छिन्। इस्पात भवन संरचना स्थापना प्रत्यक्ष कर्मचारीहरु र आउटसाइडर्स दुवै निर्माण साइटमा खसेको गर्ने को लागि खतरनाक काम सूचीमा समावेश। धेरै मामलाहरुमा घरहरू, छत को पतन मा अग्लो क्रेन गिरावट। यो सबै प्राविधिक आवश्यकताहरु को उल्लंघन कारण भइरहेको छ। हो, र गुमाउनु र वस्तुहरू पर्न सक्छ काम को पाठ्यक्रम मा। एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा को - यो एक भवन साइट बाड, अनधिकृत व्यक्ति द्वारा साइटमा प्रवेश को inadmissibility छ, संरचना को विधानसभा मा काम को स्थान, पनि, सुरक्षित हुनुपर्छ।
स्थापना लागत सबै-रूसी दर (USIS) र क्षेत्रीय मूल्यहरु (ERER) स्थापना विभिन्न प्रकारको रेकर्ड जो normative कागजात, आधारमा हिसाब छ। तिनीहरूले उपकरण स्थापना, प्रबलित ठोस संरचना र आफ्नो मर्मतका को विधानसभा मा काम समावेश गर्नुहोस्। यो लागत पनि प्रदर्शन काम को क्षेत्र, मात्रा, काम को जटिलता, climatic सुविधाहरू समावेश गरिएको छ। खातामा काम, लागत मा सम्भव वृद्धि समयमा हुन सक्छ कि त्रुटिहरू को एक किसिम लिन निश्चित हुनुहोस्।
स्थापना काम - बहु-मंजिल्ला भवन, भविष्यमा सुविधाहरु सबै थप सञ्चालन निर्भर जो गुणस्तर को निर्माण मा एक महत्वपूर्ण चरण हो।
प्रभाव ड्रिल वा पंच। निर्माण वा नवीकरण? उपकरण र खरिद विपरीत
सेप्टिक ट्यांक। समीक्षा मालिक
प्लास्टिक Windows KBE, समीक्षा र सुविधाहरू
ब्याट्री कस्तो राम्रो घर भवन प्रयोग गरिन्छ, र जो - निजी क्षेत्र लागि ताप?
स्यान्डविच प्यानल: प्रकार र विनिर्देशों। सैंडविच प्यानल छत र पर्खाल
हल्का खैरो कपाल रंग को रंग: फ्रान्सेली विशेषताहरू
गुलाब को रंग को मूल्य, वा कसरी सही उपहार चयन गर्न
पोल्टावा Eparchy: विगत र वर्तमान
कागज क्रेन कदम कसरी बनाउने?
एक ब्लेंडर मा सबै भन्दा लोकप्रिय नुस्खा milkshake दुवै बच्चाहरु र वयस्क अपिल हुनेछ!
Georgiy Gurdzhiev: जीवनी र साहित्यिक गतिविधि
जीवनी McKee Sagaipova र रचनात्मक तरिका
स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु: भरी आलु